ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မိမိတို့မြန်မာပြည် - Yangon Nation News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် Nikkei Asia Review အင်တာဗျူးမှ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်သော ဖြေကြားပြောဆိုမူ၊
လွန်ခဲ့သော တစ်နှစ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား Nikkei Asia Review မှမေးသည့် အပေါ် ဖြေကြားထားသော အဖြေအား ဖတ်ကြည့်ကြကာ ၊ယခု(၂၀၂၀) ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ မိမိတို့မြန်မာပြည်အတွက် နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းတစ်ခုကို အထိုင်တစ်ကျ ဖြစ်လာစေရန်၊အဘယ်ကဲ့သို့သောသဘောထားနှင့် ဖြောင့်မတ်ရိုးရှင်းသောခေါင်းဆောင်ဆိုသည်ကို သိသာကြပါစေ၍၊
ဤသို့သောခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ ထိုခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်မူဖြင့် မိမိတို့တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ်လုပ်နေသော ၊လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အင်အားအပြည့်ရှိသော နိုင်ငံရေးပါတီကို ယနေ့မိမိတို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်ချက်အရ (၂၀၂၀) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် မိမိတို့တစ်ဦးခြင်း၏ အခွင့်အာဏာအပြည့်ရှိသည့် အသဲကြားကမဲတစ်ပြားချင်းဆီကိုအသုံးပြုကြပြီး၊
အနိုင်မဲများပေးကြခြင်းဖြင့်ဆက်လက်ရွေးချယ် တာဝန်ပေး၊နိုင်စေခြင်းအလို့ငှာ ပြည်သူအများသိသာကြပါစေရန်၊ရေးသားတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊
မီဒီယာ တစ်ချို့နှင့် အဖွဲ့အစည်း၊လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချို့၏ လိုသလိုရေးသားပြောဆိုမူများ ရှိနေပါသဖြင့် ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး တိတိပပ မှန်မှန်ကန်ကန်သိကြပါစေရန်ရည်ညွှန်းပါသည်။
အမေး – NLD ကဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် အဆိုပြု တာတွေတွေ့ရပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီ ရှေ့လျောက်ဖြစ်ထွန်းဖို့ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းပုံ အပြောင်းအလဲ မျိုးကို ခင်ဗျားအနေနဲ့ထောက်ခံပါလဲ၊
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမူတွေ အတွက်ကောဘယ်လိုရည်မှန်းချက်မျိုးတွေရှိနေပါသလဲ ?
အဖြေ – လွှတ်တော်ထဲမှာ ဒီကိစ္စအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေးနေကြတာကို စောင့်ကြည့်နေဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းဖို့
ကျွန်မတို့အကြံပြု ထားတာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာ သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ၊
အခြေခံအားဖြင့်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဒီမိုကရေစီရရှိဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်၊
ကျွန်မတို့ဒီမိုကရေစီပြည့်စုံတဲ့အဆင့်မရောက်သေးပါဘူး၊ ဒီနေရာမှာ အတော်လေးကို သိသာ ထင်ရှားတဲ့ ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ လွှတ်တော်ထဲက ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ % ကရွေးကောက်တင်မြှောက် ခံရသူတွေမဟုတ်ကြပါဘူး၊
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ဖို့ဆိုတာက
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရမယ်လို့ကျွန်မတို့ယုံကြည်ထားပါတယ်၊ ဒါကလည်း အခြေခံကျ တဲ့အချက်ပါ၊
ဒါအပြင် နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာကပြည်သူတွေထဲမှာပဲ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို တကယ်တမ်း သေချာစေမယ့်အခြား ပြင်ဆင်မူတွေလဲ လုပ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
အမေး – ဖွဲ့စည်းပုံပိုင်းအပြောင်းအလဲ လုပ်နိုင်မယ့် အလားအလာကော ?
အဖြေ – အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာမှာပဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ယုံကြည်ထားပါတယ်၊ ဘယ်လောက်မြန်မြန် ဖြစ်လာမလဲဆိုတာသာ ကျွန်မတို့ခန့်မှန်းဘို့ခက်နေတာပါ၊ လူက ရေးဆွဲထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို မပြောင်းလဲနိုင်စရာမရှိဖူးလို့ကျွန်မတို့ မြင်ပါတယ်၊
ရှင်လည်း သိကောင်းသိနေမှာပါဘဲ၊ ဆန့်ကျင်မူတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ၊ ဒါကိုကျော်လွှားရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုကျော်လွှားဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မူနဲ့ တည်ငြိမ်မူကို အနှောင့်အရှက် မပေးနိုင်တဲ့ နည်းမျိုးနဲ့လုပ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အမေး – ခုထိကောတုံ့ ပြန်လာတဲ့ အနေအထားက ?
အဖြေ – ခုထိတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေကြတုန်းပါဘဲ၊
ကျွန်မ သတိပြု မိသလောက်တော့ စစ်တပ်က
ကျွန်မတို့ အကြံပြုထားတဲ့ ပြောင်းလဲရေးတွေ အပေါ် သိသိသာသာ အားတက်သရောမရှိလှဖူးဆိုတာပါဘဲ။
အမေး – အပေးအယူလုပ်လို့ရနိုင်စရာရှိတယ်လို့ မြင်ပါသလား?
အဖြေ – ပြည်သူတွေ ကျွန်မတို့ နောက်မှာရှိနေပါတယ်၊
အဲ့တာက အရေးအကြီးဆုံးဘဲလို့ ကျွန်မ ယူဆပါတယ်၊
ဒီမိုကရေစီမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒသာ လွှမ်းမိုးအောင်ပွဲခံရမယ်လို့ ကျွန်မယုံကြည်ထားပါတယ်၊ ဒါကလည်းအနှေးနဲ့အမြန် ဆိုသလို အမြဲတမ်း ဖြစ်လာနေကြပါဘဲ။
အမေး – နောက်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်
အခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲမူအချို့လုပ်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်လား ?
အဖြေ – ဒါက ပြောဘို့ခက်ပါတယ်၊ လာမယ့် နှစ်အတွင်း အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်မူ လုပ်နိုင်မယ့် အလား အလာပေါ် အခြေခံပြီး နောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေတည်ဆောက်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဖြေကြားပြောဆိုမူများသည်ကား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါတယ်၊
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို မရေးသား ကြစေခြင်ပါ၊
နိုင်ငံ့ အရေးကိစ္စဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၏ ပြောဆိုမူများကိုသေသေချာချာ သိအောင် မကြိုးစားပါဘဲ သတင်းဖြစ်ပြီးရော၊ငါရေးလိုက်ရင် ငါပြောလိုက်ရင် လူတွေကတော့ လက်ခုပ်တီးမှာဘဲဟူ၍ ထင်ရာကို ကောက်ချက်ချရေးသားမူသည် မိမိတို့လို
နိုင်ငံရေးစနစ်ပြသနာ၊တိုင်းရင်းသားအရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်အရေး၊လူမူစီးပွား ပြသာနာများ ကိုယ်စီ ကိုယ်စီ ရှိနေသည့် နိုင်ငံငယ်လေးသည်ကား အဆက်ဆက်သောပြသနာများကိုသာထမ်းထားရသောပြသနာအိုးနိုင်ငံဘဝမှကျွတ်လွတ်မည်မဟုတ်တော့ပါ။
ယနေ့ခေတ်ကာလသည် နိုင်ငံတကာသို့ပေါက်မြောက်ပြီး၊ နိုင်ငံများမှ ဘေးဖယ်ချ၍ မဖြစ်နိုင်သည့် မိမိတို့ မြန်မာပြည်တွင်တိုင်းပြည်နှင့်တိုင်းသူပြည်သားများအရေးကိုသာ ဦးထိပ်ထားဆောင်ရွက်နေသော –
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိနေ၊ဦးဆောင်နေသည့် အခါသမယတွင် မိမိတို့ ပြည်သူပြည်သားများ၏ ညီညွတ်သည့် စုပေါင်းအင်အားများဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံကို ပြုပြင် ပြောင်းလဲစေမူများနဲ့အတူ ပြန်လည်ထူထောင် တည်ဆောက်ကြဖို့လိုအပ်ပါပြီ။
နောက်တစ်ပိုဒ်တွင် မြန်မာ၊ဂျပန်၊ထိုင်းများနှင့် နှီးနွယ်နေသည့် ထားဝယ် စီမံကိန်းနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စများအကြောင်း မေးမြန်းမူများအား၊
အလေးထားစွာဖြင့် .ကိုသိန်းဌေး ၈၈ပဲခူး၊